Custom Logistics Service ကိုစတင် ရန် လူသစ် Global သည် Shoplazza နှင့်ပူးပေါင်း သည် - Pandaily
Feb 23, 2022, 19:33ညနေ 2022/02/23 23:25:52 Pandaily
တရုတ် နည်းပညာ ကုမ္ပဏီကြီး Alibaba မှ ထောက်ပံ့ သော ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး ကုမ္ပဏီ Novoy Globalပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး သဘောတူညီချက်ဗုဒ္ဓဟူး နေ့တွင် စီးပွားဖြစ် ပလက်ဖောင်း Shoplazza နှင့်အတူ ။ နှစ်ဖက် စလုံးက နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး ၏ အချိန်ကိုက် မှုကို သေချာ စေရန်နှင့် စားသုံးသူ အတွေ့အကြုံ တိုးတက်စေရန် ပြည်တွင်း စုဆောင်း ခြင်း၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တင်ပို့ ခြင်း၊ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး ခြေရာခံ ခြင်း၊ တစ်နေရာ တည်း တွင် ရောင်းချ ပြီးနောက် ၀ န်ဆောင် မှုများအပါအ ၀ င် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ကုန်သည် များနှင့် ကုန်အမှတ်တံဆိပ် များအတွက် စိတ်ကြိုက် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများ ကိုပူးတွဲ ပေးလိမ့်မည်။
စမ်းသပ် မှုများစွာ ပြုလုပ် ပြီးနောက် လူသစ် ဂလို ဘယ် နှင့် Shoplazza တို့သည် ကမ္ဘာအနှံ့ ရှိ နိုင်ငံပေါင်း ၁၂၀ ကို လွှမ်းခြုံ သော ကုန်သည် များအတွက် အရည်အသွေးမြင့် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများကို တရားဝင် စတင်ခဲ့သည်။
ကုန်သည် သည် ၀ င်ရောက် ပြီးပါက အမှာစာ အချက်အလက်များ ကိုအလိုအလျောက် ရရှိ နိုင်သည်၊ အမှာစာ များ ကိုလျင်မြန်စွာ ဖန်တီး နိုင်ပြီး လျင်မြန်စွာ ပေးပို့ နိုင်သည်။ ကုန်သည် များသည် နိုင်ငံ ၏အဓိက ဒေသများရှိ အခမဲ့ စုဆောင်း ခြင်းနှင့် အထုပ် စုဆောင်း ခြင်းကဲ့သို့သော မြန်ဆန်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကို တွေ့ကြုံ ခံစား နိုင်သည်။ စွမ်းဆောင်ရည် အာမခံ ချက်နှင့် စိုးရိမ်ပူပန် မှု ကင်း သော ငွေပေးချေ မှုများရှိသည်။ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ကုန်သည် များသည် အထွေထွေ ERP စနစ်ဖြင့် အမှာစာ များ ပေးပို့ နိုင်ပြီး ဥရောပ ကုန်သည် များသည် အကောက်ခွန် ရှင်းလင်းရေး ၀ န်ဆောင်မှုများကို ခံစား နိုင်သည်။
COVID-19 စတင် ကတည်းက တရုတ် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် e-commerce သည် အွန်လိုင်း စျေးကွက် ရှာဖွေ ခြင်း၊ အွန်လိုင်း အရောင်းအ ၀ ယ် များနှင့် အဆက်အသွယ် မရှိသော ဖြန့်ဖြူးခြင်း များတွင် အားသာချက် ရှိသည်။ တိုင်းပြည် သည် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် စွမ်းရည် များကို တက်ကြွစွာ တိုးတက် နေပြီး သွင်းကုန် နှင့် ပို့ကုန် ပမာဏ မှာလည်း လျင်မြန်စွာ တိုးတက် နေသည်။
အေကာက္ခြန္ ကိန္းဂဏန္း မ်ားအရ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ၏ နယ္စပ္ ျဖတ္ေက်ာ္ အီလက္ထ ရြန္ နစ္ ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္း သြင္းကုန္ သြင္းကုန္ စုစုေပါင္း ပမာဏမွာ ယြမ္ ၁ ဒသမ ၉၈ ထရီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ၁၃ ဘီလီယံ) ရွိၿပီး ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ လာေၾကာင္း သိရသည္။ ၎င်းတို့အနက် ပို့ကုန် သည်ယွမ် ၁. ၄၄ ထရီလီယံ ရှိပြီး ၂၄. ၅% တိုးတက်ခဲ့သည်။
ဂလို ဘယ် လိုက် ဇ ေး ရှင်း ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး ကုမ္ပဏီ တစ်ခုအနေဖြင့် လူသစ် သည် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး “e အချက်အချာ” ၆ ခု ကိုတည်ဆောက် ခဲ့ပြီး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပင်လယ် နှင့် လေကြောင်း ကုန်တင် လမ်းကြောင်း ၁၈၀၀ ကျော် ဖွင့်လှစ် ခဲ့ပြီး စတုရန်းမီတာ ၃ သန်းကျော် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ဂိုဒေါင် များကို လည်ပတ် ခဲ့သည်။ ဖြန့်ဖြူး ရေး စင်တာ များ၊ ပြည်ပ သိုလှောင်ရုံ များနှင့် ကိုယ်ပိုင် အချက်အလက်များ စသည့် အခြေခံအဆောက်အအုံ များကိုလည်း ဥရောပ နိုင်ငံ များစွာ တွင်တည်ဆောက် ထားသည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:လူသစ် သည် အရှေ့တောင်အာရှ ၏အကြီးဆုံး မောင်း သူမဲ့ ဂိုဒေါင် ကိုတည်ဆောက် သည်
Shoplazza သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ B2C e-commerce အတွက် ထုတ်ကုန်များနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းနည်း များကို အာရုံစိုက်သည်။ ၎င်း၏ စျေးဝယ် လှည်း SaaS သည် ကုမ္ပဏီ ၏အဓိက ထုတ်ကုန် ဖြစ်ပြီး ကုန်သည် များအား လုပ်ငန်းလည်ပတ် ခြင်း၊ အမိန့် စီမံခန့်ခွဲ ခြင်း၊။ ကုမ္ပဏီသည် ယခင်က C1 ရန်ပုံငွေ ဒေါ်လာသန်း ၁၅၀ ကို ပြီးစီးခဲ့သည်။